Koakerisma - Wikipedia
Ny Koakerisma na Fikambanan'ny Sakaiza na Fiangonan'ny Sakaiza dia fihetsiketsehana na fikambanana ara-pinoana niorina tao Angletera tamin'ny taonjato faha-17 vokatry ny fialan'ireo heverina ho mpivily lalana avy amin'ny Fiangonana anglikana. Atao amin'ny teny anglisy hoe Quakers izay midika hoe "mpangovitra" ny mpivavaka ao amin'io fikambanana io. Izy samy izy dia mifanome anarana hoe Friends izay midika hoe "sakaiza". I George Fox (1624-1691) no heverin'ny mpahay tantara ho nanangana ilay fikambanana na ny tena nanan-danja indrindra tamin'ireo mpitarika azy. Ao amin'ny firehana mistikan'ny Fanavaozam-piangonana lalim-paka no misy ny fikambanan'ny Sakaiza.
Isan-karazany ny fomba anatanterahan'ny Sakaiza ny fivavahany ka ahitana hatramin'izay mitovy fomba amin'ny Kristiana evenjelika nefa koa ahitana ireo izay manaraka firehana manakaiky ny tsy finoana an'Andriamanitra (ateisma).
Hatramin'ny fotoana niforonany tao Angletera dia niely tany amin'ireo zanatany anglo-saksona aloha ilay fikambanana. Tamin'ny taonjato faha-20 dia nampiely ny fivavahany tany Amerika Atsimo sy tany Afrika ireo misioneran'ny Fiangonan'ny Sakaiza. Amin'izao fotoana izao dia miisa 350 000 eo ho eo ny Sakaiza araka ny antontanisan'izy ireo
1 Ny amin'ny fanekem-pinoana sy ny sakramenta
3 Ny fiheverany ny Baiboly
4 Ny Koakerisma maneran-tany
Ny amin'ny fanekem-pinoana sy ny sakramentaHanova
Ny Fikambanan'ny Sakaiza dia miavaka amin'ireo fikambanana hafa avy amin'ny kristianisma noho ny tsy fananany fiekem-pinoana sy tsy fisian'ny antanan-tohatra na ambaratongam-pitondrana eo amin'ny fandaminana ny fiangonany. Ho an'izy ireo dia raharahan'ny tsirairay ny finoana ka ny isam-batan'olona dia malalaka amin'ny fanarahana ny zavatra mandresy lahatra azy. Ny ankamaroan'ny Sakaiza dia mino ny amin'ny atao hoe "fahazavana anaty" (anglisy: inner light) na inona na inona ny hevitra mety homen'ny tsirairay izany teny izany. Maro ireo Sakaiza miaiky fa Kristiana nefa mahatsapa fa tsy tafiditra ao amin'ireo zavatra enti-mamaritra ny Kristiana mitana ny mahazatra.
Amin'izy ireo dia tsy ilaina ny sakramenta, na ny batisa na ny fanasan'ny Tompo (na eokaristia); tsy ilaina koa, hoy izy, ireo na ny fiekem-pinoana. Famantarana ny fahasoavan' Andriamanitra ho azy sy ho an'ny hafa ny asa ataon'ny mpino tsirairay. Ny batisan'ny Fanahy dia zavatra iainana sy fiovana anaty, ary ny firaisana amin'i Kristy dia miseho ao amin'ny fihaonan'ny mpivavaka. Endriky ny firaisana amin'ny fanasan'ny Tompo ny fiaraha-misakafo ataon'ny mpino.
Manadratra ny fifandraisana mivantana eo amin'ny Olona sy Andriamanitra ny Sakaiza, ka tsy ilainy ny mpisorona mpanelanelana ny Olona amin'Andriamanitra. Izany no nilazana fa tsy manaraka ny tokony ho izy ny Sakaiza ka niharan'ny fanenjehan'ny mpitondra fivavahana anglikana tamin'ny fotoana nanombohany. Ny Sakaiza dia mino ny fisiana ao amin'ny olona tsirairay ny "fahazavana avy amin'Andriamanitra" izay katsahiny ao amin'ny fandinihan-tena mangina. Ny fotoam-pivavahana amin'ny ankapobeny dia tora-po sy mandeha ho azy. Malalaka ny fananarana sy ny famporisihana ataon'ny mpandray anjara tsirairay satria vokatry ny firaisana amin'ny Fahazavana avy any ambony izany. Voatsindrimandrin'ilay Fanahy nanindrimandry an'ireo nanoratra ny Baiboly ny mpino rehetra. Noho izany dia tsy mahalala fomba hafa hahazoana ny fahasoavan'Andriamanitra ny Sakaiza afa-tsy amin'ny alalan'izany tsindrimandry (na fanilovana) mivantana izany.
Manao fivorianana isam-bolana (anglisy: monthly meetings) na isan-telo volana na isan-taona (anglisy: yearly meetings) ny Koakera mba handaminany ny raharahan'ny fikambanany ka ny fahefana hanapahana ny amin'ny finoana sy ny fitantanan-draharaha dia ny fivorian'ny mpikambana ihany. Izany fivorianana izany dia andraisan'ny mpikambana rehetra anjara, na lahy na vavy, na ny zandriolona na ny zokiolona, ka mitovy ny rehetra amin'izany.
Ny fiheverany ny BaibolyHanova
Ireo Sakaiza voalohany dia nanda ny fiheveran'ny Protestanta maro anisa ny amin'ilay atao amin'ny teny latina hoe Sola Scriptura (adika hoe: "Soratra Masina irery ihany") ka mihevitra fa i Kristy, fa tsy ny Baiboly, no tenin'Andriamanitra. Nanambara i Robert Barklay tao amin'ny asa sorany atao hoe Apology fa ny Soratra Masina dia tsy inona fa fanambaràna ny loharano fa tsy ny loharano akory, ary tsy afaka ny ho fototry ny fahamarinana sy ny fahalalana izy, na koa ho fitsipika voalohan'ny finoana sy ny fitondran-tena.
Ny Koakera sasany dia namerina indray ny fahefan'ny Baiboly ka niteraka fivakisana maharitra teo amin'ny fikambanan'ny Sakaiza izany tamin'ny taonjato faha-19. Amin'izao fotoana izao ireo Sakaiza ara-pilazantsara (anglisy: Evangelical Friends) dia mihevitra fa manam-pahefana amin'ny famaritana izay tokony hinoana ny Baiboly, araka ny Fanambaràn'i Richmond. Ny Koakera hafa koa dia azon'ny fihetsiketsehana toy ny protestantisma liberaly ka nanapa-kevitra fa mety misy fitarihan-dalana izay tsy ny Soratra Masina, ka lasa tsy lohalaharana ny Soratra Masina amin'izany. Ny hafa koa dia mandà tsotra izao ny Baiboly ka izany no mahatonga ny fivoriany hahitana olona tsy kristiana akory fa mety ho Silamo na finoana hafa na tsy mino an'Andriamanitra mihitsy aza (ateisma). Amin'ny Koakera dia misy ny atao hoe "Fanambaràna mitohy" (izany hoe: tsy vita indray mandeha ny fanambaràn'Andriamanitra fa mitohy ka mampitombo hatranihatrany ny fahalalantsika ny marina)
Ny Koakerisma maneran-tanyHanova
Ao Afrika no ahitana Koakera betsaka indrindra (mihoatra ny 40 %). Ny Koakera ao Afrika Atsinanana dia manatanteraka fihaonana isan-taona matetika, indrindra ny ao Kenia, ahitana azy ireo koa ny ao Roanda sy Borondy. Ny ankamaroan'ny fihaonana dia manatanteraka ny fanompoam-pivavahana voaomana sady ahitana pastora.
Tokony miisa eo amin'ny 25 000 eo ny Koakera ao Britaina Lehibe izay manao fotoam-pivavahana tsy voaomana. Izy ireo no mamorona ny atao hoe Fivoriana isan-taona britanika. Ao Etazonia ireo Koakera dia manatanteraka fanao samihafa, nefa betsaka koa ny zavatra mampiray azy. Betsaka ny lohahevitra teolojika tsy itovizan'izy samy izy. Ny Fikambanan'ny Sakaiza ao Eoropa sy ao Aostralia dia nifandray hatry ny ela tamin'ny Koakeran'i Londra.
Eo amin'ny sehatra maneran-tany dia misy ny atao hoe Friends World Committee for Consultation ("Komity filan-kevitra maneran-tanin'ny Sakaiza") izay hafohezina amin'ny hoe FWCC izay nanatanteraka fihaonana in-telo isan-taona maro teo anelanelan'ny taona 1994 sy 2007. Taorian'ny fihaonana natao tao Nairoby ao Kenia tamin'ny taona 2012 dia nanjary in'efatra isan-taona izany.
Ny Koakera olon-dehibe tamin'ny taona 2012 tao Afrika dia niisa 196 790 ka ny 20 eto Madagasikara; ny tany Aostralia sy Zelanda Vaovao: 1 660; ny tany Azia: 21 000; ny tao Eoropa: 23 835; ny tany Atsinanana Afovoany: 70; ny tany Amerika Avaratra sy Atsimo: 133 987; ka raha atambatra dia manakaiky ny 378 000.
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) dia niorina vokatry ny fampiraisana tamin'ny taona 1968 ny Fiangoanana telo, dia ny London Missionary Society sy ny Société des Missions Evangéliques de Paris ary ny Friends’ Foreign Mission Association (izay lasa Quaker Peace and Social Witness amin'izao). Tsy nanaraka ny koakerisma anefa ny FJKM fa nisafidy ny lalan'ny Fiangonana nohavaozina.
↑ 1,0 et 1,1 Jereo: Finding Quakers Around the World, FWCC [tahiry] sy Sarintanin'izao tontolo izao 2007 an'ny FWCC Archived Janoary 14, 2008 at the Wayback Machine [tahiry] ary Quaker Information Center [tahiry].
↑ « the scriptures "are only a declaration of the fountain, and not the fountain itself, therefore they are not to be esteemed the principal ground of all Truth and knowledge, nor yet the adequate primary rule of faith and manners" ». Ny fehezan-kevitra fahatelo [tahiry] ao amin'ny Apology of Barclay.
↑ "Finding Quakers Around the World" (PDF). Friends World Committee for Consultation. Notsidihina tamin'ny 04 Jolay 2016.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Koakerisma&oldid=1021998"
Dernière modification le 12 Aogositra 2021, à 05:00
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 05:00 ity pejy ity.